Sidee Xallinta Hay'addu ugu daraa Qiimaha Habraaca Suuqgeyntaada | Martech Zone
Isniin, Janaayo 24, 2022 Isniin, Janaayo 24, 2022 Zara Ziad
Tiro badan oo suuqgeyneed B2B ah - ku dhawaad ​​27% - ayaa qiray taas Xog aan ku filnayn ayaa ku kacday 10%, ama xaaladaha qaarkood, xitaa in ka badan khasaaraha dakhliga sanadlaha ah.
Tani waxay si cad u muujineysaa arrin muhiim ah oo ay wajahayaan inta badan suuqleyda maanta, waana: tayada xogta oo liidata. Xogta aan dhamaystirnayn, maqan ama tayada liidata waxay saamayn wayn ku yeelan kartaa guusha hababka suuqgeyneed. Tani waxay dhacdaa maadaama ku dhawaad ​​dhammaan hababka waaxyaha ee shirkadda - laakiin gaar ahaan iibinta iyo suuqgeyntu - ay si weyn u huriyaan xogta ururka.
Haddi ay tahay mid dhamaystiran, 360-aragtida macaamiishaada, hogaaminta, ama rajada, ama macluumaadka kale ee la xidhiidha alaabada, adeegyada bixinta, ama goobaha ciwaanka - suuqgeyntu waa meesha ay dhammaan isugu yimaadaan. Tani waa sababta suuqleydu ay ugu dhibtoonayaan marka shirkadu aysan shaqaaleyn hababka maaraynta tayada xogta saxda ah si ay xogta joogtada ah u soo bandhigto iyo hagaajinta tayada xogta.
Balooggan, waxaan rabaa in aan u soo jeediyo dareenka ugu badan ee dhibaatada tayada xogta iyo sida ay u saamayso hababka suuq-geynta muhiimka ah; Waxaan markaas eegi doonaa xalka suurtagalka ah ee dhibaatadan, iyo ugu dambeyntii, waxaan arki doonaa sida aan u dhisi karno si joogto ah.
Sidaas, aynu bilowno!
Dhibaatada Tayada Xogta Ugu Wayn Oo Ay Wajahaan Suuqgeeyayaashu
In kasta oo, tayada xogta liidata ay keento liis dheer oo arrimo suuqgeyneed ah oo shirkad ah, laakiin ka dib markii ay u gudbiyeen xalalka xogta macaamiisha 100+, arrinta tayada xogta ugu badan ee aan aragnay dadku waa:
Helitaanka hal aragti hantida xogta asaasiga ah.
Arrintani waxay soo baxdaa marka diiwaannada nuqulka ah loo kaydiyo isla hay'ad isku mid ah. Halkan, ereyga hay'ad macnaheedu wuxuu noqon karaa wax kasta. Inta badan, dhinaca suuq-geynta, ereyga cidda waxa ay tixraaci kartaa: macmiilka, hogaanka, rajada, badeecada, goobta, ama shay kale oo udub dhexaad u ah waxqabadka hawlahaaga suuqgeyneed.
Saamaynta Diiwaanada nuqul ka mid ah ay ku Yeelan Yihiin Hannaanka Suuqgeyntaada
Joogitaanka diiwaannada nuqul ka mid ah kaydka xogta ee loo isticmaalo ujeedooyinka suuqgeyntu waxay qarow u noqon kartaa suuqle kasta. Markaad haysato diiwaanno nuqul ah, kuwan soo socda ayaa ah xaalado halis ah oo aad la kulmi karto:
Waqti lumis, miisaaniyad, iyo dadaal - Maadaama xog-ururintaadu ay ka kooban tahay diiwaanno badan oo isku mid ah, waxa laga yaabaa inaad ku dhameysato wakhti, miisaaniyad, iyo dedaallo badan oo aad geliso isla macaamilka, rajada, ama hogaanka.
Ma fududayn karo waayo-aragnimada shakhsi ahaaneed - Diiwaanada nuqulku waxay inta badan ka kooban yihiin qaybo kala duwan oo macluumaadka ku saabsan hay'ad. Haddii aad samaysay olole suuqgeyn ah oo aad isticmaalayso aragti aan dhamaystirnayn oo macaamiishaada ah, waxa laga yaabaa inaad ku dhamaato inaad macaamiishaada ka dhigto mid aan la maqal ama khalad la fahmay.
Warbixin suuqgeyneed aan sax ahayn - Diiwaanada xogta nuqul ka mid ah, waxaa laga yaabaa inaad ku dhamaato inaad bixiso aragti khaldan oo ku saabsan dadaalkaaga suuq-geynta iyo soo noqoshada. Tusaale ahaan, waxaad iimayl u dirtay 100 hoggaan, laakiin kaliya waxaad ka heshay jawaabaha 10 - waxay noqon kartaa in 80 ka mid ah 100kaas ay ahaayeen kuwo gaar ah, 20ka soo hartayna waxay ahaayeen nuqullo.
Wax-soo-saarka shaqada iyo wax-soo-saarka shaqaalaha oo hoos u dhacay - Marka xubnaha kooxdu ay u soo qaataan xogta cid gaar ah oo ay helaan diiwaanno badan oo lagu kaydiyay ilo kala duwan ama waqti la isku soo ururiyey isla isha, waxay u dhaqantaa sidii jidgooyo weyn oo wax soo saarka shaqaalaha. Haddii ay tani marar badan dhacdo, markaas waxay si muuqata u saamaynaysaa hufnaanta hawleed ee urur dhan.
Aan awoodin in uu sameeyo sifo beddelasho sax ah - Haddii aad diiwaangelisay booqde isku mid ah sida qof cusub mar kasta oo ay soo booqdaan kanaaladaada bulsho ama mareegahaaga, waxa ay noqon doontaa ku dhawaad ​​wax aan suurtagal ahayn in aad samayso sifo beddelasho sax ah, oo aad ogaato dariiqa saxda ah ee booqdehu u raacay diinta.
Fariimaha jirka iyo kuwa elegtarooniga ah ee aan la gudbin - Midkani waa natiijada ugu badan ee diiwaannada nuqullada ah. Sidaan hore u soo sheegnay, diiwaan kasta oo nuqul ahi waxa uu u janjeeraa in uu ka kooban yahay qayb qayb ah oo ka mid ah hay'adda (taasi waa sababta ay diiwaanadu u noqdeen nuqul ka mid ah xogta xogtaada meesha ugu horeysa). Sababtan awgeed, diiwaannada qaarkood waxay yeelan karaan meelo maqan, ama macluumaadka xiriirka, taasoo sababi karta in fariimaha la soo diro ay fashilmaan.
Waa maxay Qaraarka Hay'addu?
Xallinta hay'adda (ER) waa habka lagu go'aamiyo marka tixraacyada hay'adaha dhabta ah ee aduunka ay u dhigmaan (isku mid) ama aan u dhigmin (hay'ado kala duwan). Si kale haddii loo dhigo, waa habka aqoonsiga iyo isku xirka diiwaanno badan oo isku mid ah marka diiwaannada loo sifeeyo si ka duwan iyo lid ku ah.
Xallinta Hay'adda iyo tayada macluumaadka ee John R. Talburt
Fulinta Xallinta Hay'adda Gelitaanka Xog-ururintaada
Markaad aragtay saamaynta baqdin leh ee nuqul ka mid ahi ku leeyahay guusha hawlahaaga suuqgeyneed, waxaa lama huraan ah in la helo hab fudud, laakiin awood leh. ka-saarista kaydka xogtaada. Tani waa meesha geedi socodka xallinta cidda soo gala
Iyada oo ku xidhan kakanaanta iyo xaaladda tayada xogta kaydintaada, nidaamkani waxa uu ka koobnaan karaa dhawr tillaabo. Waxaan ku qaadi doonaa tallaabo kasta oo habkan ah si aad u fahamto waxa dhabta ah ee uu xambaarsan yahay.
Fiiro gaar ah: Waxaan isticmaali doonaa ereyga guud ee 'entity' anigoo qeexaya habka hoose. Laakiin isla nidaamka ayaa lagu dabaqi karaa oo suurtogal u ah hay'ad kasta oo ku lug leh habka suuq-geynta, sida macmiilka, hogaanka, rajada, cinwaanka goobta, iwm.
Talaabooyinka Habka Xallinta Hay'adda
Aruurinta xogta hay'adaha ee ku nool ilaha xogta ee kala duwan - Tani waa tallaabada ugu horreysa uguna muhiimsan ee geeddi-socodka, halkaas oo aad aqoonsato halkaas oo sida saxda ah ayaa loo kaydiyaa diiwaanada goobta. Tani waxay noqon kartaa xogta ka imanaysa xayaysiisyada warbaahinta bulshada, taraafikada mareegaha, ama ay gacanta ku qoraan wakiilada iibka ama shaqaalaha suuqgeynta. Marka ilaha la aqoonsaday, dhammaan diiwaanada waa in la isku keeno hal meel.
Soo bandhigida diiwaanada la isku daray - Marka diiwaannada la isugu keeno hal xog, hadda waa waqtigii la fahmi lahaa xogta oo aan daaha ka qaadi lahayn tafaasiisha qarsoon ee qaab-dhismeedkeeda iyo waxa ku jira. Xogta sifayntu waxay si tirakoob ah u falanqaysaa xogtaada oo waxay ogaataa haddii qiyamka xogtu aanay dhammaystirnayn, faaruqin, ama raacdo qaab iyo qaab aan sax ahayn. Soo bandhigida xog-ururintaada waxay daaha ka qaadaysaa tafaasiisha kale, waxayna muujinaysaa fursadaha nadiifinta xogta ee suurtogalka ah.
Nadiifinta iyo habaynta diiwaanada xogta - Xogta qoto-dheer waxay ku siinaysaa liis la taaban karo oo shay ah oo lagu nadiifinayo laguna jaangooyo xogta xogtaada. Tani waxay ku lug yeelan kartaa tillaabooyinka lagu buuxinayo xogta maqan, hagaajinta noocyada xogta, hagaajinta qaababka iyo qaababka, iyo sidoo kale u kala qaybinta qaybaha adag ee qaybo-hoosaadyada si loo baaro xogta wanaagsan.
Isbarbardhigga iyo isku xirka diiwaannada ay iska leeyihiin koox isku mid ah - Hadda, diiwaannadaada xogtu waxay diyaar u yihiin in la is waafajiyo oo la isku xidho, ka dibna dhammeeyo diiwaannada ka tirsan isla hay'ad la mid ah. Habkan waxaa badanaa lagu sameeyaa iyadoo la hirgelinayo algorithms-ku-beegnaanta heerka-warshad ama lahaanshaha kuwaas oo ama si sax ah u sameeya sifooyin si gaar ah u aqoonsanaya, ama ciyaar daahsoon oo isku-darka sifooyinka hay'ad. Haddi ay dhacdo in natiijooyinka algorithm-ka is-daba-marintu ay khaldan yihiin ama ay ku jiraan waxyaabo been abuur ah, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad hagaajiso algoorithmamka ama aad gacanta ku calaamadisid kulannada khaldan sida nuqul ama mid aan nuqul ahayn.
Dhaqangelinta xeerarka isku darka hay'adaha diiwaannada dahabiga ah - Tani waa meesha isku darka kama dambaysta ahi ka dhacayso. Waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad lumiso xogta ku saabsan hay'ad lagu kaydiyay diiwaannada oo dhan, markaa tillaabadan waxay ku saabsan tahay habaynta xeerarka si loo go'aamiyo:
Waa kuwee diiwaanka master record xagee ku yaaliin nuquladiisa?
Sifooyinkee ka yimi nuqullada aad rabto in aad nuqul ka samayso diiwaanka sare?
Marka sharciyadan la habeeyo oo la fuliyo, wax-soo-saarku waa diiwaannada dahabiga ah ee hay'adahaaga.
Samee Qaab-dhismeedka Xallinta Hay'adda Socota
In kasta oo aan soo marnay hage tallaabo-tallaabo fudud oo lagu xallinayo hay'adaha ku jira kaydka xogta suuq-geynta, waxaa muhiim ah in la fahmo in tan loola dhaqmo sidii nidaam socda oo ururkaaga ah. Meheradaha maalgeliya si ay u fahmaan xogtooda iyo hagaajinta arrimahooda tayada xudunta u ah waxa loo dejiyay kobac aad u rajo badan.
Si degdeg ah oo sahlan loo hirgeliyo geeddi-socodkan oo kale, waxaad sidoo kale siin kartaa hawl-wadeennada xogta ama xitaa suuq-geynayaasha shirkaddaada software-ka xallinta cidda ay fududahay in la isticmaalo, kaas oo ku hagi kara tallaabooyinka kor ku xusan.
Gebogebadii, waxaanu si badbaado leh u odhan karnaa xog-ururinta-free-ka-la'aanta ahi waxay u dhaqantaa sidii ciyaartoy muhiim u ah kor u qaadista ROI ee hawlaha suuq-geynta iyo xoojinta sumcadda summada dhammaan kanaalada suuq-geynta.
Tags: sifada beddelkasaxnaanta xogtatayada xogtakala saaridhay'adaha kala duwandiiwaanno nuqul ahnuqulohalbeegxallinta ciddaerxogta suuq-geyntawarbixin suuqgeyneedisku hayb ahwaxa